MyTourBook, ezigbo njikwa njikwa | Site na Linux
MyTourBook, ezigbo njikwa njikwa
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Aplicaciones
Ndewo onye ọ bụla! N'ihi enweghị oge edebeghị m ogologo oge, mana ọ dị ka ọ kwesiri ịlaghachi iji kọọrọ gị ihe bụụrụ m nnukwu nchọta. Ọ bụ MyTourBook, sọftụwia na - akwụ ụgwọ na - enye gị ohere ịbubata, wepụ, dezie, lelee ma bufee ụzọ mbupụ ederede nke ejiri ngwaọrụ GPS, ọ bụrụ ekwentị gị, ngwaọrụ maka ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè, GPS ọdịnala, wdg. Ebumnuche bụ isi nke mmemme a bụ ijikwa mgbatị egwuregwu gị. Enwere ike iji ya dezie faịlị nke GPS nke ụgbọ ala gị mepụtara mana, dịka m kwuru, ọ na-agbasosi ike ka ị nwee ike soro mmega ahụ gị, na-ahụ anya ma na-achịkọta nsonaazụ ya na eserese dị iche iche. Dị ka ọtụtụ asọmpi ahụ, mmemme ahụ mepụtara na Java ma nwee ọtụtụ nyiwe (ọ gụnyere nkwado maka GNU / Linux na Windows, ọ bụghị maka Mac OS X).
Lee ihe e kere eke na ịma mma ya niile:
Site n'ụzọ, nke a bụ nseta ihuenyo na-egosi na ibe akwụkwọ mmemme ahụ. O di nwute na achọtaghi m ihe obula nke gosiputara mmemme ahu na GNU / Linux. Site na ebe a, nyocha niile bụ nke m, na-eji Ubuntu 15.04.
1 Tupu ịmalite na MyTourBook
2 Akwụkwọ MyTour
3 Ntinye nke MyTourBook
Tupu ịmalite na MyTourBook
Tupu m gawa n’ihu ikwu okwu banyere obere mkpuru ụka a, ka m kọọrọ gị etu nchọta ya siri mee. N'ime ọnwa ole na ole ugbu a, a raara m onwe m nye ọrụ dị oke egwu nke ịgbanwee kpamkpam (ma ọ bụ otu o kwere mee) na nnwere onwe ndị ọzọ na ekwentị m ochie Samsung Galaxy S (nke a maara nke ọma dịka i9000 ma ọ bụ galaxysmtd) Ihe dịka ihe m mere mgbe m si na Windows gaa Linux n'oge ahụ. Ekwenyere m na ọ ga-abịa ebe ị ga-anwa ịbanye n'ime ihe efu ma gafere kpamkpam, na-ahapụ iji ngwọta nke etiti. Ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe m chọrọ ịnwale. Nke a abụghị naanị maka ebumnuche ma ọ bụ ụkpụrụ, kamakwa maka ebumnuche bara uru. Ekwentị m dara ogbenye na-eji nwayọ nwayọ na mmelite ọ bụla nke Cyanogenmod. Agbalịrị m ihichapụ ngwa, m fiddled na bụla ngwa m na-ahụ gafee, mere a overclock (Na CPU / GPU na-aga ngwa ngwa karịa ihe haziri site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe). Onweghị ihe na - arụ ọrụ, echekwara m na Android 4.4 nwere ike ọ bụ karịa maka m dị umeala n’obi Galaxy S. agbanyeghị, agbalịrị m ihe niile. Emechara m ọtụtụ mbọ, m kpebiri ịwụnye Cyanogenmod site na ncha ma gbalịa F-Droid (kama Google Play) dị ka ahịa ngwa.
Agaghị m ghaara gị ụgha, mgbanwe ahụ adịghị mfe ma ọ nwere uru na ọghọm ya. N'ọdịnihu m na-eme atụmatụ ide post na isiokwu a. Maka oge a, enwere m ike ịgwa gị na n’etiti uru ya, na enweghị mgbagha, ọ bara uru ịkọ nnukwu ọsọ ọsọ ekwentị m kụrụ. Onu ogugu nke ihe Google nile choro di egwu. Ugbu a na anaghịzi m eji ha eme ihe, achọpụtara m. Ee n'ezie, a tụrụ m anya ntakịrị "mmelite", mana echeghị na ọ dị ọtụtụ. Agbanyeghá''``, the point is that one of applications that I had a hard time pushing a free a free was Adidas Micoach. Ngwa a dakọtara na Njedebe, Onye na-agba ọsọ, wdg. Ejiri m ya jiri dee ekwentị m na-arụ kwa izu na ogige. Emechara m chọta ngwa abụọ nwere ike ịbụ ezigbo ndị ọzọ na m ka na-eji taa: MyTracks y Onye na-esote. Nke mbụ mepụtara n'oge ahụ na Google na agbanyeghị na koodu isi ya ka dị, Google ekwupụtala nke ahụ ga-ewepụ ya n'oge ọ bụla. RunnerUp, n'aka nke ọzọ, dị ezigbo mma mana agbakwunyeghi ya na nchekwa F-Droid, mana ị ga-eji aka gị tinye ngwugwu APK.
Ọ bụ ezie na ngwa abụọ ahụ na-ekwe ka data ahụ mekọrịta ya na ọrụ ntanetị dị iche iche (Google Fit, wdg), ebe ọ bụ na ndị a bụ nke onwe ha, ekpebiri m na ọ ka mma ịga maka mmekọrịta mmekọrịta. Nke ahụ bụ, bupụ data na faịlụ wee nyochaa ya na kọmputa m, na-enweghị ọrụ igwe ojii ọ bụla. Ọ bụ mgbe ahụ ka m chere nnukwu nsogbu ịchọta usoro ihe omume ruru, nke bụ sọftụwia na-akwụghị ụgwọ yana nke na-arụ ọrụ n'okpuru GNU / Linux. Ọ bụ ezie na achọtara m ụzọ ọzọ dị mma - dị ka Turtle Sport ma ọ bụ Onye ọzọ- MyTourBook di elu kari. Ka m gosi gị ihe kpatara ya ...
Agaghị m ghaara gị ụgha, MyTourBook bụ mmemme dị mgbagwoju anya, nke ị nwere ike iji mee ọtụtụ ihe, ọ dịkwa mfe ịlafu n'etiti ọtụtụ nhọrọ na bọtịnụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dịtụ mfe iji ma nwee nghọta kensinammuo iji tụnyere mmemme ndị ọzọ yiri ya.
Ihe mbụ ị nwere ike ịnwa ịme bụ ibubata faịlụ GPX ma ọ bụ TCX, nke MyTracks, RunnerUp kere ma ọ bụ usoro ọzụzụ ọ bụla ma ọ bụ ọrụ ọ bụla, ebe ọ bụ na ụdị ndị a kachasị ewu ewu maka ịchekwa ụdị data a.
Nke a bụ ihe ọ dị ka mgbe anyị webatara data ahụ:
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụghị naanị na ọ na-ebubata faịlụ ahụ n'ụzọ zuru oke mana ọ na-egosipụtakwa ụzọ dị iche iche (nọmba) ma na-egosipụta esemokwu dị iche iche (ọsọ) na ụda dị iche iche, dịka gradient na-egosi n'aka ekpe. N'ụzọ dị otú a, ọ ga-ekwe omume ịhụ n'ụzọ dị omimi ebe anyị gbara ọsọ ọsọ ma ọ bụ nwayọ. Enwere ike itinye otu mgbagha a na mgbatị obi, ogo ma ọ bụ ọsọ site na iji triangles nwere agba dị iche na-egosi n’elu ogwe dị n’elu. MyTourBook na-eji ndabara OpenStreetMap (ọrụ imekọ ihe ọnụ iji mepụta maapụ efu na ndezi), n'agbanyeghị na enwere ike ịhọrọ ndị ọzọ na-enye map.
Na njegharị Njem njegharị na elu ọ ga-ekwe omume idezi ụfọdụ data izugbe nke njegharị: aha, nkọwa, mmalite na njedebe, ụbọchị, anya, ngụkọta obi obi, calorie ọkụ, data ihu igwe, wdg.
N'ikpeazụ, n'okpuru map anyị hụrụ na nseta ihuenyo mbụ, ihe ngosi dị egwu na-egosi na-enye anyị ohere ịhụ ma gafere njikọ data nke ụzọ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ngbatị m na-agbago bụ ihe dị ka nkeji 6 kwa kilomita, nke anaghị ekwu okwu nke ọma banyere ọnọdụ ahụ m. Site na mwepu, ọ ga-ewe 60 nkeji (1 hour) iji gbaa 10 K. Ebumnuche nke eserese a yiri nke map ahụ: site na triangles ndị dị n'elu anyị nwere ike ịhụ data ndị ọzọ, dịka obi obi, ọsọ , wdg. Otú ọ dị, na nke a ọ ga-ekwe omume ịgafe-jikọta data iji detụ ire na piacere, dịka ọmụmaatụ dị ka nke a:
N'okwu a, akara na-acha ọbara ọbara bụ akara obi m, ahịhịa ndụ bụ elu, na akara odo bụ ijeụkwụ.
Usoro a bụ ihe magburu onwe ya iji nyochaa nke ọma ọ bụla arụ ọrụ ahụ wee chọta isi ihe ndị ga-eme ka ọ dịkwuo mma. Dịka ọmụmaatụ, enwere m otu ụda olu. Obere ugwu na-acha odo odo ị na-ahụ nwere ike ịkwụsịtụ mgbe ị na-achọ ịgafe n'okporo ámá ma ọ bụ ihe yiri ya. Na mgbakwunye na nke a, ọsọ m dị ezigbo mkpa, nke na-adịghị njọ maka ụfọdụ mgbatị (dịka ọmụmaatụ, ịgbake site na ọrụ siri ike na nso nso a), mana ọ bụghị ihe niile, dị ka gosiputara na ọbụna na-agba ọsọ anaghị ere ọkụ dị ka calorie dị ka obere ike na-esochi nke oge ezumike.
Ma, MyTourBook na-enye ohere karịa naanị ịtụle njem na iche. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-enye anyị ohere ịdekọ ndekọ njem anyị niile n'otu ebe. Ihe dị ka akwụkwọ akụkọ ma ọ bụ akwụkwọ iji chekwaa ha niile. N’okpuru ị ga - ahụ “akwụkwọ njegharị” m, jiri ụfọdụ njegharị m bulitere na mmemme ahụ.
Enwere ike igosipụta otu ozi ahụ na usoro kalịnda:
Dị ka ị pụrụ ịhụ, MyTourBook na-egosi na izu gara aga agara m ịgba ọsọ ugboro abụọ. N'aka aka nri, ọ na-egosi ọnụọgụ nke kilomita ndị njem, oge, ijeụkwụ na data ndị ọzọ, agbakwunyere kwa izu.
N'ikpeazụ, ọ ga-ekwe omume ịhụ ọnụ ọgụgụ izugbe nke ụzọ anyị ma nyochaa data site na ụbọchị, izu, ọnwa ma ọ bụ afọ, nke na-enye anyị ohere ịnwe njikwa ọzụzụ anyị n'ụzọ doro anya:
N'okwu n'ozuzu, anyị ekpuchiwo ọrụ kachasị mkpa nke mmemme ahụ. Agbanyeghị, ekwenyeghị na MyTourBook abụghị naanị ihe egosiri n'isiokwu a. Kwere m, ị nwere ike iji ya mee ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ ga-ekwe omume mbugharị njegharị niile na GPX, TCX ma ọ bụ CSV; ibubata data na ọdụ ụgbọ mmiri; tụlee njegharị na ibe gị; mee a Nyocha Conconi; mekọta foto nke njegharị gị; ma ọ bụ mezie elu nke njem gị na iji data nke NASA nyere. Mba, anaghị m egwu egwu… nke a wee bụrụ nnukwu uru bara uru n'ihi na ekwentị m na-agbakọ elu dabere na data GPS, nke n'onwe ya ha abụghị 100% pụrụ ịdabere na ya. N'aka nke ọzọ, MyTracks nwere nsogbu ụfọdụ idekọ ogo elu nke ọma. N'ihi MyTourBook nke a abụghịzi nsogbu.
Ka o sina dị, ọ ga-abụ ihe siri ike ịgwa gị ihe niile a ga-eme na mmemme a dị ịtụnanya. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-egwu egwuregwu, dị ka ịgba ọsọ ma ọ bụ ịnya igwe ma jiri ngwaọrụ iji soro ọzụzụ gị, nweere onwe gị ịnwale MyTourBook.
Ntinye nke MyTourBook
1. MyTourBook choro Java 7 ma ọ bụ karịa.
En Debian / Ubuntu na ihe ndi ozo nke enyere site na iwu a:
sudo apt-nweta wụnye openjdk-7-jre
2. Mgbe ahụ ị ga-ebudata faịlụ ahụ mytourbook_x.xxlinux.gtk.x86.zip ma kpughee ya.
3. Mytourbook faịlụ ga-eme ikikere. Ọ bụrụ na ịnweghị ha, anyị nwere ike ekenye gị iwu a:
sudo chmod + x mytourbook
Ndị enyi anyị ndị ọrụ Arch Linux na nkwekọrịta nweta ndụ dị mfe. MyTourBook dị na Ebe nchekwa AUR.
Iji mee MyTourBook na Spanish, jiri sọọsọ "nl -es" dị ka ndị a:
./mytourbook -nl bu
Ma ọ bụghị ya, MyTourBook ga-agba ọsọ site na iji asụsụ ndabara nke sistemụ arụmọrụ.
Nke ahụ niile. Enwere m olileanya na ị ga-enwe obi ụtọ. Echefukwala ịhapụ ihe ị kwuru mgbe ị nwara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » MyTourBook, ezigbo njikwa njikwa
Ihe 20 kwuru, hapụ nke gị
Nnukwu, m ga-eburu nke ahụ n’uche mgbe m ga-amalite iziga email ọzọ hahaha. Ndị ọjọọ, e dere na Java .. Akpọrọ m Java asị .. 🙁
ka anyi jiri Linux dijo
Mụ onwe m, mana ekwesịrị m ikweta na mmemme a nwere interface mara mma ma dịkwa oke ọsọ. Ọ dị ka Java… haha.
akpa ego dijo
Echere m na ị na-eji teepu iji tụọ pulsations, ị nwere ike ịgwa m ma ha niile na-eji ụdị mmemme a arụ ọrụ ???
Achọrọ m ịzụta otu mgbe ma enwere m egwu nke a ...
Obu mu ka obu ya bu 100% gtk ???
@ianpocks: ee, na ụkpụrụ ha niile kwesiri ịrụ ọrụ. Fọdụ ngwaọrụ nwere ike jikọọ na mmemme a. Ndị ọzọ, agbanyeghị, ịnwere ike ịmekọrịta ha na ọrụ igwe ojii nke ngwaọrụ ndị a jiri wee "bupu" nsonaazụ na faịlụ GPX ma ọ bụ TCX, nke ị nwere ike ibubata na mmemme a. Nke ahụ bụ ihe m ji teepu Adidas mee.
Maka ụdị ngwa a ọ bara uru rụọ ọrụ atụmatụ data na GPS nke Galaxy Mini m. Aga m eji mmemme a karịa maka njem m n'etiti obodo na obodo (ọ dị nwute na Lima, njem ọha na eze bụ ọrịa na-efe efe, ịbịaru ebe ụfọdụ wee bụrụ nsogbu ma ọ bụrụ na ịmaghị ngwa ngwa).
ma ọ dịghị atụmatụ data dị mkpa
Ọ dị ezigbo mma! Ọ na-enyere m aka nke ukwuu ugbu a na enwere m elekere nke na-abịa na GPS na nlegharị m, maka ọzụzụ m n'ụkwụ na igwe kwụ otu ebe.
Daalụ maka ịkekọrịta;) ..
Zaghachi na RawBasic
Ọ dị mma maka gị, mana enwere nche GPS nke na-eji fiwmware na / ma ọ bụ sọftụwia na - akwụghị ụgwọ?
shiba 87 dijo
Enwere leikr, nke ndị injinia Nokia mere
Rungba ọsọ? Kedu ka ị si chịkọta nke ahụ?
Zaghachi na Untipocorriente
$ cd ọsọ
$ sudo ka awụnyere
$ ./ ọsọ
Haha… Bilie n'oche, m! 🙂
José A. dijo
Ndewo onye ọ bụla!
Mmemme a bụ ihe m na-achọ ogologo oge, etinyego m ya ma tinye data m mana enweghị m ike ịchọta faịlụ RUNTASTIC na mkpanaka mbubata. Onwere onye mara ebe ha no?
Zaghachi Jose A.
Ndewo, enwetala m ya site na mbupụ ọrụ ahụ site na weebụsaịtị webụsaịtị.
Enweghị m ike ibubata maapụ kmz. Do ma ihe m ga - eme?
Zaghachi iji gelete
Nwere ike ịgbanwe usoro a na ngwa ntanetị:
Leonel Morales ebe obibi oyiyi dijo
Agbalịrị m RunnerUp ngwa maka gam akporo, achọtabeghịkwa m ụzọ iji bupu faịlụ GPX ma ọ bụ TCX, agbanyeghị m chọpụtara na site na ngwa a ị nwere ike ibupụ ụzọ maka ngwa ekwentị ndị ọzọ na-eji data mkpanaka dịka Strava (N'okwu m, m na-eji ya maka njem njegharị m). Ndị na-agba ọsọ bụ ezigbo ụzọ maka ndị na-achọghị iji ego na data mkpanaka, ịnwere ike ị were data ahụ n'ejighị ego wee mesịa bulite ya na akaụntụ Strava gị na njikọ Wi-Fi. N’oge na-adịghị anya m ga-anwale Mytracks na android ịbubata data na My Tour Book. Ezigbo onyinye!
Zaghachi Leonel Morales
N'ezie, ngwa ngwa My Tracks na-enye ohere ibupụ faịlụ TCX, ugbu a enwere m ike ibubata njegharị m na Akwụkwọ My Tour.
Ndewo, enweghị m ike ịwụnye ya. Onwere onye nwere ike inyere m aka?
Mgbe m tinyere ọnụ ya:
Ọ na-egosi m:
bash: ./mytourbook: enweghị ike ịgba ọsọ ọnụọgụ abụọ faịlụ: Njọ ezighi ezi executable
bropages, ihe nnọchi anya maka akwụkwọ akụkọ ochie
QuiteRSS: ezigbo RSS na-agụ desktọọpụ